Ndị kacha mma PS3 emulators maka gam akporo | Nzukọ mkpanaaka
Ihe kacha mma PS3 emulators maka gam akporo
Edere Ferreno | 09/05/2022 12:00 | Egwuregwu
Ọtụtụ ndị ọrụ na gam akporo chọrọ ka ha nwee ike igwu egwu egwuregwu sitere na nyiwe ndị ọzọ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba. Nke a bụ ihe emulators mere ka o kwe omume, n'agbanyeghị na Google gbochiri ọnụnọ nke ọtụtụ n'ime ha na Storelọ Ahịa Play. Ya mere ọ na-esiri ike iji ha. Ihe na ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ bụ PS3 emulators maka gam akporo.
Ọzọ anyị ga-ahapụrụ gị ndepụta ụfọdụ n'ime kacha mma ps3 emulators maka gam akporo. N'ụzọ dị otú a, site na ekwentị gam akporo gị ma ọ bụ mbadamba ụrọ ị ga-enwe ike ịme egwuregwu ndị a site na Sony console. Ụzọ dị mma iji nweta aha ụfọdụ ị na-agaghị enwe ike ịkpọ ọzọ. Anyị achịkọtala usoro emulators anyị nwere ike ibudata ugbu a n'efu na android, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha anọghị na Storelọ Ahịa Play.
Nhọrọ nke ụdị emulators a abụghị nke kachasị obosara, ma ihu ọma anyị nwere ụfọdụ nhọrọ na anyị nwere ike ibudata na android. N'ezie, ọ dị mkpa iburu n'uche ihe ndị a chọrọ nke ọ bụla n'ime emulators ndị a nwere. Ebe ọ bụ na ha na-agbanwe ntakịrị ma ọ ga-ekwe omume na e nwere nke na-adịghị arụ ọrụ na ngwaọrụ gị, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ, ha na-ajụ ihe ndị dị ka inwe octa-core processor, dịka ọmụmaatụ. Ya mere, ọ dị mkpa iburu nke a n'uche, ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu banyere nke ọ bụla ihe ndị ha nwere, ka ị mara nke ị ga-enwe ike ibudata na ngwaọrụ gị. Ya mere, ị ga-enwe ike na-egwu ndị a PS3 egwuregwu na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
3 Emulator PS3
4 PSP emulator Pro
5 EmuPs3-Ps3 emulator Project
Nke a bụ doro anya na otu n'ime ndị kasị mma PS3 emulators maka gam akporo. Ọ bụkwa ihe emulator PS3 na-arụ ọrụ na ma gam akporo na iOS ngwaọrụ, otú ọtụtụ ndị nwere ike irite uru na ya ojiji. PS3Mobi bụ ngwa na-anọnyere anyị ogologo oge mana ọ ka na-arụ ọrụ nke ọma taa. Ọ ga-ekwe ka anyị na-eṅomi ụdị ọ bụla nke egwuregwu, na elu ndakọrịta na utu aha dị na ISO usoro. Otu n'ime uru ya.
Otu n'ime isi ihe siri ike nke emulator a bụ na o nwere ihe nkesa ebe ị nwere ike ibudata egwuregwu vidiyo na-enweghị ịgafe na ibe Ịntanetị dị iche iche. Usoro ahụ na-adị mfe karị ma dị nchebe n'ihi nke a. PS3Mobi nwekwara a dị mfe interface, nke na-eme ka ọ dị mfe iji na, n'ezie, nke a dị mfe interface bụ ihe ga-enyere mgbe ọ na-abịa na-enwe ike na-egwu ndị a niile PS3 utu aha na gam akporo.
PS3Mobi bụ otu n'ime ndị kasị ebudatara PS3 emulators maka gam akporo. Nbudata ya ugbu a karịrị nde iri na ise. Dị ka ọtụtụ n'ime unu nwere ike iche n'echiche, ọ bụghị emulator anyị nwere ike ibudata na Ụlọ Ahịa Google Play. Anyị ga-ebudata ya na webụsaịtị onye nrụpụta. Ngwa ahụ anaghị achọ nnukwu nrụnye ka ịmalite ịrụ ọrụ na ekwentị etiti. Ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo ga-enwe ike irite uru na emulator a.
Ihe emulator nke abụọ na ndepụta a bụ nhọrọ zuru oke nke na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Ọ ga-akwado ụdị egwuregwu PS3 niile, ma ọ bụrụhaala na ha nọ na usoro ISO. Nke a bụ emulator na ọ bụghị ndị ọrụ gam akporo niile ga-enwe ike ịwụnye n'ihi ihe ọ chọrọ. Ebe ọ bụ na ọ na-ewe ma ọ dịkarịa ala ihe nhazi 8-isi nwere ọsọ nke elekere dị elu karịa 1 GHz. Na mgbakwunye, ị ga-enwerịrị opekata mpe 4 GB maka ihe niile na-aga nke ọma yana ikike nchekwa zuru oke iji budata aha na ngwaọrụ n'onwe ya.
Na interface larịị, ọ bụ ihe emulator dị mfe iji. Ọ nwere interface dị mfe n'ihe gbasara imewe, yabụ onye ọrụ gam akporo ọ bụla ga-enwe ike ịgagharị ya gburugburu n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ebe ọ bụ na ị ga-emepe egwuregwu a na-ajụ ajụjụ nke ịchọrọ site na isi taabụ wee chere ka ọ buru ibu. Ya mere, nke a ga-eme ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu na-enweghị ihe ndọpụ uche. Ọzọ uru nke a PS3 emulator.
Play Play enwere ike ibudata ya na webụsaịtị onye nrụpụta ya, na njikọ na mbido. Dị ka ọ dị na ndị ọzọ na ndepụta a, adịghị na Storelọ Ahịa Play. Nbudata na ịwụnye emulator a bụ ihe dị mfe, ọ gaghị ewe oge dị ukwuu. Ya mere ị nwere ike ịmalite iji ya na ngwaọrụ ngwa ngwa.
Otu n'ime ihe kacha mma PS3 emulators maka gam akporo na anyị nwere ugbu a bụ nke a. Ọ bụ n'ezie, otu n'ime kacha zuru ezu nke PS3 maka gam akporo nke anyị nwere ike ịhụ taa. Ọ bụ ngwa anyị nwere ike ibudata na ma gam akporo na iOS. N'okwu abụọ ahụ, ọ nwere mkpebi dị mma maka ngwaọrụ nke sistemụ arụmọrụ abụọ a na ọ ga-enye arụmọrụ mmiri mgbe niile.
Iji jiri emulator a, ịkwesịrị ịnwe ekwentị nke etiti ma ọ bụ karịa, yana ihe nrụpụta 8-core yana kaadị eserese ga-enwe ike ịkpọ aha ihe njikwa Sony ọ bụla. Na-arụ ọrụ site na ụdị Android 4.0 ma ọ bụ karịa, ya mere ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime unu ga-enwe ike iji ya mee ihe. Ntinye nke emulator bụ ihe dị mfe na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ọ nwere ike imepe ụdị ụdị dị iche iche, n'etiti ha, n'ezie, bụ usoro ISO. Ya mere, ọ gaghị enwe nsogbu mgbe ịmepe egwuregwu site na ya.
Ngwa a maka ekwentị bụ ụdị kọmpụta gbanwetụrụ yana emegharịrị. Nke a bụ ihe nwere ike ịkpata nsogbu n'ihe gbasara ndakọrịta, ma n'ozuzu anyị ga-enwe ike igwu ọtụtụ aha PS3 site na ya. Ihe emulator a na-enyekwa anyị mkpebi kacha nke 720p. Emulator PS3 enwere ike ibudata ya na webụsaịtị onye nrụpụta, n'ihi na ọ dịghị na Google Play.
Ekwela ka aha ghọgbuo anyị, n'ihi na anyị na-emeso emulator na ga-enye gị ohere ịkpọ aha PSP na PS3 na gam akporo ngwaọrụ. Na mgbakwunye, ọ bụ nhọrọ anyị nwere ike iji na ekwentị ọ bụla nwere ụdị Android 4.0 ma ọ bụ karịa. Ọ bụghị nke nwere ọtụtụ ihe a chọrọ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere etiti etiti ma ọ bụ ihe ka mma, ọbụlagodi afọ ole na ole gara aga, ọ ga-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ngwa na-erughị 30 megabyte na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọ naghị eri ọtụtụ ihe ma na-eṅomi 90% nke aha ya.
Ihe emulator a nwere interface kpochapụwo nke ndị emulators niile na-eji yana nhazi njikwa na ihuenyo n'onwe ya enweghị ike imeri yana dị mfe. Na mgbakwunye, enweelarị nhazi ọkọlọtọ dị, ma ọ bụghị na anyị achọghị ime ihe ọ bụla na nke a. Ya mere, onye ọ bụla ga-enwe ike ịhazi njikwa ndị a n'ụzọ dị mma maka ha.
PSP Emulator Pro dị na sava dị iche iche. Dị ka nhọrọ ndị ọzọ dị na ndepụta a, ọ bụghị ihe dị na Ụlọ Ahịa Google Play. Enwere ike ịwụnye APK nke emulator a ma ọ bụrụhaala na etinyere ngwa sitere na isi mmalite amabeghị. Ọ bụ otu n'ime emulators kacha ebudatara, ebe ọ gaferela nde 20 nbudata n'ụwa niile. Ị nwere ike ibudata ya na ekwentị gam akporo gị site na njikọ a.
Nke ikpeazụ n'ime ndị a kacha mma PS3 emulators maka gam akporo Ọ bụ nke anyị nwere ike ibudata na Play Store, ọbụlagodi ugbu a. Ọ bụ emulator nwere ike ibudata ugbua na ụdị mbụ ya na ọ bụlarị ọrụ dị ogologo oge. Ọ bụ ezie na ọ kabeghị na nsụgharị ikpeazụ ya, nke a na-atụ anya na ọnwa ole na ole, emulator a na-arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ gam akporo. Na mgbakwunye, maka ọtụtụ ndị ọ bụ uru na ọ dị na Play Store.
Otu n'ime uru bụ na o nwere nkwado maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke extensions, n'ime ha bụ: bin, .mdf, .pbp, .iso, .toc, .cbn, .m3u, zip, .img, .cue na 7z. Ya mere, ọ bụ emulator nwere ike iji ọtụtụ. Iji nwee ike iji ya, ị ga-achọ ịnweta ngwaọrụ dị n'etiti ma ọ bụ dị elu, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe na-eri ọtụtụ ihe onwunwe ma chọọ ụfọdụ ike. Mana ọtụtụ ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ kwesịrị inwe ike ịgba ya n'enweghị nnukwu nsogbu.
Ọzọkwa, ị ga-enwe ike gwuo ihe dịka 90% nke egwuregwu PS3 na emulator a. Yabụ na ị ga-egwu egwuregwu kachasị amasị gị na ya n'enweghị ọtụtụ nsogbu. Cheta na ọ bụghị nsụgharị ikpeazụ, n'ihi ya, e nwere ihe ndị a ka na-egbuke egbuke na ya. N'agbanyeghị nke a, arụmọrụ dị mma na na interface larịị ị ga-ahụ na ọ dị nnọọ mfe iji. Nke a bụ emulator anyị nwere ike ibudata n'efu na Storelọ Ahịa Play, site na njikọ a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Ihe kacha mma PS3 emulators maka gam akporo
Kedu ihe bụ streamer na gịnị bụ ọrụ ya?
Otu esi ewepu spam na WhatsApp